ယုံကြည်စိတ်ချရသောသံဖြူကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ - ညီအစ်ကိုထုပ်ပိုးခြင်း
နေအိမ် / သတင်း / ယုံကြည်စိတ်ချရသောသံဖြူကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
လူတော်တော်များများဒီမှာရပ်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျပန်းရွေးပါ။ သို့သော်သင်၏အလုပ်မပြီးသေးပါ။ သင်၏ရှာဖွေမှုသည်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သော်လည်းသင့်ရွေးချယ်မှုမှာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဒါကြောင့်နာမည်ကြီး tins ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးဖို့သင်ရဲ့သုတေသနကိုဆက်လုပ်ပါ။ သင်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲတွင်ကုမ္ပဏီများ၏နောက်ခံကိုစစ်ဆေးပါ။
သူတို့သံဗူးတွေကိုဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာရှာကြည့်ပါ။ သူတို့စတင်နေပြီလား။ ဒါ့အပြင်ဒီပေးသွင်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့စစ်ဆေးပါ။ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုလူကြိုက်များသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုထက်ပိုသောကုမ္ပဏီများကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ သင်သည်သင်၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုအတွေ့အကြုံရှိသော၊ ကျော်ကြားသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ? သင်တစ် ဦး ကျပန်းအခြေခံပေါ်မှာပေးသွင်းရှေးခယျြသငျ့သလော မဟုတ်ပါ။ သင်၏အလုပ်ကိုတစ်ဝက်ပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်အလျင်စလိုမနေပါနဲ့။ ယင်းအစား၊ ထိုကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရန်အချိန်ယူပါ။ လူကြိုက်များသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားပြီးသင်၏စီးပွားရေးစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဘာပြောနေသည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏သက်သေခံချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ တရား ၀ င် tins ကုမ္ပဏီသည်အောင်မြင်သော ၀ င်ငွေအမြောက်အများရှိသောပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်စာရင်းကြီးရှိသင့်သည်။ ထိုသက်သေခံချက်များကိုဆက်သွယ်ပြီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူလုပ်ကိုင်သောသူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေပါ။ ထောက်ခံချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ နာမည်ကောင်းသည့်သံဗူးပေးသွင်းသူများ၏နောက်ဆုံးစာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့သင်သည်အရည်အသွေးပြည့်သံဘူးများကိုမှာယူလိုသည်။ သို့သော်အရည်အသွေးသည်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးအပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုရှာဖွေပါ။ အဆိုပါသံဗူးကုမ္ပဏီသင့်အချိန်တွင်သင်၏အမိန့်ပြီးအောင်နိုင်သလား? သူတို့ကတစ် ဦး စိတ်ကြိုက်အမိန့်ဖြည့်စွက်ရန်တပ်ဆင်ထားပါသလား?
ပြissuesနာတွေကိုသူတို့မြန်မြန်ဖြေရှင်းသလား။ ထိုကဲ့သို့သောမေးမြန်းမှုအားလုံးသည်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သင့်အားစာရင်းမှမလိုလားအပ်သောပေးသွင်းသူများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သင်၏ရှာဖွေမှုကိုစစ်ထုတ်သည့်အခါရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပါ။
ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်သံဗူးများကိုပေးသည်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်များပို့ပြီးသည်နှင့်သူတို့ပြန်လှည့်မကြည့်ကြပါ။ အခါအားလျော်စွာသင်အကူအညီနှင့်အကူအညီလိုကောင်းလိုပေမည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ် ဦး အထူးသဖြင့်တွေအများကြီးအခြေအနေမကောင်းတဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြissuesနာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ မဟုတ်ရင်သင်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Prev: Packaging box manufacturers and printing techniques they use
နောက်တစ်ခု - Important factors to consider when choosing customized box supplier